ကြေငြာချက် Archives - Page3of 12 - News @ M-Media
မသမာသူများ ပြဿနာ ဖန်တီးလာနိုင်သည့် အခြေအနေ NLD သတိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
November 10, 2015 — ကြေငြာချက်, မြန်မာသတင်း
လှေစီးဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
ဇွန် ၁ ၊ ၂၀၁၅ M-Media . လှေစီးဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တခုကို ဒီကနေ့ နေစွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကြေငြာချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ . လှေစီးဒုက္ခသည်များနှင့်[Read More…]
June 1, 2015 — ကြေငြာချက်
ပြည်လုံးကျွတ် မွတ်စလင် ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မတီ ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်
May 21, 2015 — ကြေငြာချက်
အစိုးရမှ မွတ်စလင်မ် ညီလာခံ ကျင်းပခွင့် မပြုကြောင်း ကျင်းပရေးကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်
အစိုးရမှ မွတ်စလင်မ် ညီလာခံ ကျင်းပခွင့် မပြုကြောင်း ကျင်းပရေးကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန် Source:UMNC FB
May 17, 2015 — ကြေငြာချက်, မြန်မာသတင်း
အယ်လ်ကိုင်းဒါး ကြေညာချက်ကို မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံး (BMA) မှ ရှုံ့ချ
စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ M-Media သီဟ အယ်လ်ခိုင်ဒါက အိန္ဒိယကို အခြေစိုက်ပြီး မြန်မာ အပါအဝင် တောင်အာရှ ဒေသမှာ ကွန်ယက်တွေ ထူထောင်သွားမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ ကိစ္စရပ်အပေါ် မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံး(BMA) မှ ရှုံ့ချတဲ့[Read More…]
September 5, 2014 — ကြေငြာချက်